करीनाको मास्कको मूल्य सुन्दा तपाईं तीन छक्क पर्नुहुनेछ ! – Khabar Patrika Np
करीनाको मास्कको मूल्य सुन्दा तपाईं तीन छक्क पर्नुहुनेछ !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २७, २०७७ समय: २२:००:४१
कोभिड-१९ को दोस्रो लहर आउने संकेत देखिएको छ, त्यसैले सावधानी अपनाउनु निकै आवश्यक भएको छ। मास्क अब हाम्रो जीवनक्लो एक महत्वपूर्ण चीज भइसकेको छ। यस्तोमा, जीवनमा मास्क निकै महत्वपूर्ण भएपछि मानिसले यसमा पनि विभिन्न प्रकारका फेशन सुरु गरेका छन्।
यो ट्रेन्ड बलिउडमा पनि चलेको छ। बलिउडका थुप्रै सुपरस्टारले फरक-फरक डिजाइनका मास्क लगाएको देख्न सकिन्छ। यस्तोमा बलिउडकी बेबो करीना कपूरले लगाएको मास्क सबैको चर्चाको विषय बन्न थालेको छ।